New Players Only. 30x Wagering Shuruudaha,
Tutankhamun waa ciyaar video cajiib Afyare in uu leeyahay 5 duntu iyo 20 paylines. Waxaa dib-u-booqday naadi theme Masaarida ku salaysan adeegsanaya Calaamooyinka hore si aad u hesho guul weyn.
Waxaa jiray Fircoon Masri, kuwaas oo waxaa lagu aasay nool iyo this dhimasho dahsoon la ogaaday in sanadka 1922 by Howard Carter.
Waxaad iska diiwaan gelin kartaa free at Coinfalls Casino iyo ciyaaro kulankaan oo wuxuu ku raaxaysan xirmo weyn soo dhaweyn ah 200% on deposit hore oo ah £ 50.00. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale dalacsiinta todobaadle ah oo bil kasta sida Game of Maalinta, maalin Cashback, iyo gunno No deposit si aad mashquul.
Games Suurogal ah waa bixiyaha software kulanka booska Tutankhamun ah. The sawiro iyo gameplay tagaan gacanta ee gacanta. naqshadeeye waxaa loo dhigaayo kulan oo tayo weyn oo halkaas ayaa jawaab daad ka ciyaartoyda.
Tutankhamun video Afyare ee play ah la ciyaari kartaa xiiso at Coinfalls Casino. All inaad sameyso waa ku rid lacagta sharadka ka 0.01p in £ 100.00. Marka aad yeellay sharadka ka dhacay button wareejin ah oo ay helaan abaal sare.
Ciyaarta ayaa ka kooban yahay calaamadaha qiimaha hoose sida 10, 9, J, S, A, iyo K kaas oo ku siin doonaa Faafiye abaalgudkii ilaa x80. Waxa kale oo uu isticmaalaa Calaamooyinka qiimaha sare sida ubaxa, dheri, Eye of Horus, iyo Gold calaamad.
Calaamooyinka waxay u baahan yihiin in ay u muuqdaan in isku darka saddex ama in ka badan ka dibna aad ka filan kartaa inay badiso si x1, 000 laablaabi. Waji Fircoon waa wakiil sida calaamad u duurjoogta aad awood inuu ku guuleysto lacagta Ghanna salka of x40 ka, 000.
Astaanta duurjoogta ah ayaa sidoo kale ku badali doono oo dhan images ku duntu ka ahayn logo kala firdhiso ah. Waxa kale oo aad ku guuleysan karto laablaabi kale sida x10, 000, x500, x100, oo x40.
The dhigeeysa free ciyaari shaqeysiin doonaan sida ugu dhaqsaha badan ay jiraan images kala firdhiso degay meel kasta shaashadda oo waxaad heli doontaa 15 dhigeeysa free oo ay la socdaan multiplier a of x3. Tani hore raadinaya ciyaarta ku ambadeen wax soo jiidata shir sanadeedkii RTP ah 95.39% iyo waxaa sidoo kale waa hab Autoplay ah la heli karo in kulankaan.
Tutankhamun Afyare waa ciyaar faraxsan oo kaa caawin kara lacagta Ghanna salka. The sawiro iyo music asalka waa tayo sare uruursanayey. hadda diiwaan at our casino inuu ciyaaro kulanka this Afyare oo xiiso leh iyo raaxaystaan ​​gunno soo dhaweyn ah 200% on your deposit ugu horeysay.